Ndịozi Ahụ Achọwakwa Ịbụ Ndị A Ma Ama Ọzọ Ka Oge Ọnwụ Jizọs Na-eru | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 20:17-28 MAK 10:32-45 LUK 18:31-34
JIZỌS EKWUGHACHI BANYERE ỌNWỤ YA
JIZỌS AGBAZIE NDỊOZI YA MGBE HA CHỌRỌ ỊBỤ NDỊ A MA AMA
Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya ka nọ na njem ha. Ha si Peria gafere Osimiri Jọdan nke dị nso na Jeriko na-aga Jeruselem maka Ememme Ngabiga nke afọ 33. Ọtụtụ ndị ọzọ sokwa ha na-aga.
Jizọs nọ ndị na-eso ụzọ ya n’ihu n’ihi na ọ na-agasi ike ka o ruo n’oge maka Ememme Ngabiga ahụ. Ma, ụjọ na-atụ ndị na-eso ụzọ ya. N’oge gara aga mgbe Lazarọs nwụrụ, Jizọs achọọ isi Peria gaa Judia, Tọmọs gwara ndịozi ibe ya, sị: “Ka anyị onwe anyị gaakwa, ka anyị wee soro ya nwụọ.” (Jọn 11:16, 47-53) O doro anya na ọ dị ize ndụ ịga Jeruselem. Ọ bụ ya mere ndị na-eso ụzọ ya ji na-atụ ụjọ.
Ma, Jizọs kwadebere ha maka ihe na-aga ime. Ọ kpọpụrụ ha iche ma gwa ha, sị: “Lee! Anyị na-agbago Jeruselem, a ga-enyefe Nwa nke mmadụ n’aka ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ, ha ga-amakwa ya ikpe ọnwụ, ha ga-enyefekwa ya n’aka ndị mba ọzọ ka ha were ya mee ihe ọchị, pịakwa ya ihe ma kpọgide ya n’osisi, n’ụbọchị nke atọ, a ga-akpọlite ya.”—Matiu 20:18, 19.
Nke a bụ nke ugbo atọ Jizọs na-agwa ndịozi ya banyere ọnwụ ya na mbilite n’ọnwụ ya. (Matiu 16:21; 17:22, 23) Ma na nke ụgbụ a, o kwuru na a ga-akpọgbu ya n’elu osisi. Ha nọ na-ege ya ntị, ma ha aghọtaghị ihe okwu ya pụtara. Ọ ga-abụ na ha na-atụ anya mgbe a ga-eweghachi alaeze Izrel ka ha soro Jizọs chịwa ma na-enweta otuto na nsọpụrụ.
Nne Jems na Jọn bụ́ Salomi so ná ndị ahụ so Jizọs na-aga Jeruselem. Jizọs gụrụ Jems na Jọn aha pụtara “Ụmụ Égbè Eluigwe,” n’ihi otú ihe si anụ ha ọkụ n’obi. (Mak 3:17; Luk 9:54) O teela ndịozi abụọ a chọwara ịbụ ndị a ma ama n’Alaeze Kraịst. Nne ha makwa. Ọ gakwuuru Jizọs, kpọọrọ ya isiala ma rịọwa ya arịrịọ. Jizọs sịrị ya: “Gịnị ka ị chọrọ?” Nwaanyị ahụ asị ya: “Kwuo ka ụmụ m ndị ikom abụọ a nọdụ ala, otu onye n’aka nri gị, otu onye n’aka ekpe gị, n’alaeze gị.”—Matiu 20:20, 21.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụ Jems na Jọn ka ọ na-arịọchitere arịrịọ a. Ebe ọ bụ na Jizọs agwabuola ha na a ga-eji ya eme ihe ọchị, taakwa ya ahụhụ, ọ gwaziri ha, sị: “Unu amaghị ihe unu na-arịọ. Ùnu pụrụ ịṅụ iko nke m na-aga ịṅụ?” Ha sịrị ya: “Anyị pụrụ ịṅụ ya.” (Matiu 20:22) Ma, ọ ga-abụ na ha aghọtabeghị ụdị ahụhụ ha ga-ata tupu ha eketa Alaeze Kraịst.
Jizọs gwaziri ha, sị: “Unu ga-aṅụ iko m, ma ọ bụghị m na-eme ka a nọdụ n’aka nri m na n’aka ekpe m, kama ọ dịịrị ndị Nna m kwadebeere ya.”—Matiu 20:23.
Mgbe ndịozi iri ndị ọzọ nụrụ ihe a Jems na Jọn rịọrọ, iwe were ha. O nwere ike ịbụ na Jems na Jọn rụsiri ụka ike mgbe ahụ ndịozi nọ na-arụrịta ụka gbasara onye ga-akacha ukwuu n’ime ha. (Luk 9:46-48) Ma hà rụsiri ụka ike mgbe ahụ ma ọ̀ bụ na ha arụsighị, ihe a ha rịọrọ gosiri na ndịozi ahụ niile ebidobeghị werewe onwe ha ka ndị dị ala otú ahụ Jizọs kụziiri ha.
Jizọs bịaziri dozie okwu a biliterenụ. Ọ kpọrọ ndịozi iri na abụọ ahụ ma jiri obi ọma nye ha ndụmọdụ. Ọ sịrị ha: “Unu maara na ndị e weere na ha bụ ndị na-achị ndị mba ọzọ na-eme ha ka ọ̀ bụ ha nwe ha, ndị ukwu ha na-achịkwa ha n’aka ike. O kwesịghị ịdị otú ahụ n’etiti unu; kama onye ọ bụla nke na-achọ ịbụ onye ukwu n’etiti unu aghaghị ịbụ onye na-ejere unu ozi, onye ọ bụla nke na-achọkwa ịbụ onye mbụ n’etiti unu aghaghị ịbụ ohu nke mmadụ niile.”—Mak 10:42-44.
Jizọs gwaziri ha ihe o mere nke ha kwesịrị iṅomi. Ọ sịrị: “Nwa nke mmadụ bịara, ọ bụghị ka e jeere ya ozi, kama ka o jee ozi, ka o nyekwa mkpụrụ obi ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta n’ọnọdụ ọtụtụ mmadụ.” (Matiu 20:28) Kemgbe ihe dị ka afọ atọ, Jizọs nọ na-ejere ndị ọzọ ozi. Ọ ka ga-emekwa nke kanụ, ya bụ, ịnwụchitere ụmụ mmadụ ọnwụ. O kwesịrị ịna-agụ ndị na-eso ụzọ Jizọs agụụ iwetu onwe ha ala na ịna-ejere ndị ọzọ ozi otú ahụ Jizọs na-eme, kama ịchọ ịbụ ndị a ma ama.
Olee otú Jizọs si kwadebe ndị na-eso ụzọ ya maka ihe na-aga ime n’ọdịnihu?
Gịnị ka mmadụ abụọ n’ime ndịozi Jizọs rịọrọ ya, gịnịkwa ka ndịozi ndị ọzọ mere?
Olee otú Jizọs si kụziere ndịozi ya na ha ekwesịghị ịchọ ịbụ ndị a ma ama?
Mụta Ịkpa Àgwà Ka Onye Ka Nta
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ndịozi Ahụ Achọwakwa Ịbụ Ndị A Ma Ama Ọzọ
jy isi 98 p. 228-229